Banyere Anyị - Xinxiang City Chengxin ọma jijiji Equipment Co., Ltd.
Xinxiang City Chengxin ọma jijiji Equipment Co., Ltd.bụ ọkachamara emeputa nke vibration ngwá na Ngwuputa ígwè na China. Companylọ ọrụ anyị dị na Mpaghara Mmepe Economic Xiaoji, Xinxiang City, Henan Province, na-ekpuchi mpaghara nke mita 80,000 na mpaghara ụlọ nke 60,000 square mita. E guzobere ụlọ ọrụ ahụ na 2003 na isi obodo edebanyere nde yuan 58. Ọ na-ejikọ R&D, imewe, mmepụta na ahịa. Ya na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji Metallurgy, Ngwuputa, unyi, chemical, ụlọ ihe, ike, okporo ụzọ na akwa engineering na ndị ọzọ ọrụ. Ugbu a, anyị ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 500 ndị ọrụ na ihe karịrị 80 technicians. Anyị ụlọ ọrụ na-abụghị nanị ọdịda dị ka a n'ógbè elu-tech enterprise, AAA Ebe E Si Nweta enterprise, n'ógbè nkwekọrịta na a pụrụ ịtụkwasị obi enterprise site Henan Provincial Department of Science and Technology, ma gafere ISO quality usoro asambodo na amanyere bụ iwu OA asambodo maka ngwaahịa eji na EU.
Chengxin Vibration aghọwo ụlọ ọrụ ihe atụ na ụlọ ọrụ ahụ ma ọtụtụ ndị ahịa amatala. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo mmekọrịta azụmahịa dị ukwuu na ụlọ ọrụ igwe, coal, na ụlọ ọrụ ike eletrik, dịka Wuhan Iron na Steel, Baosteel, Capital Iron and Steel, Jianlong Group, Jiuquan Iron and Steel, Yanshan Iron and Steel, Ganglu , na Hanye. Na mgbakwunye na ịnye nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ, Chengxin Vibration na-ebupụkwa Vietnam, Bulgaria, Abu Dhabi, Indonesia, Turkey, Botswana, Zambia, Cambodia, Guatemala na mpaghara ndị ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ eguzobewo ụlọ ọrụ ahịa na ndị ọrụ ọrụ aka na mba ahụ dum, na-eme netwọk ahịa na ike mmepe mmepe siri ike na usoro njikwa zuru ezu.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Mmetụta iguzosi ike n'ezi ihe enwetala oke nkenke, akpaaka na ọgụgụ isi na imepụta ngwaahịa na mmepụta. N'otu oge ahụ, ọ guzobewo usoro mmepụta na njikwa njikwa nke na-eme ka ọrụ rụọ ọrụ nke ngwa ngwa, ọnụọgụ ego na ozi gbasara ozi, ma nweta ezigbo uru akụ na ụba. Ugbu a, uru akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ahụ, nyocha sayensị na teknụzụ na ike mmepe, na asọmpi ahịa ngwaahịa so n'etiti ụlọ ọrụ ụlọ.
Isi ngwaahịa ndị Chengxin Vibration rụpụtara gụnyere edemede isii: ihe ngebichi, ndị na-ebugharị, ndị na-ekpo ọkụ, motọ vibration, ndị na-ebugharị vibration na akụkụ ndị ọzọ ngwaahịa. Ngwaahịa ndị a emeela ihe karịrị usoro 20 na ihe karịrị nkọwa 400.
• Ihuenyo jijiji: otutu ntaneti na-arụ ọrụ nke ọma, mkpuchi nchedo gburugburu ebe obibi, gburugburu ebe obibi na-eri nri gburugburu ebe obibi, ihu gburugburu na-emegharị ahụ, usoro ntanetị na-agbanwe agbanwe, ogwe aka na-agbanwe agbanwe, oyi / ọkụ ọkụ na-enyo enyo, oval nha nha ihu, mkpuchi uyi mkpuchi, ala meziri, fatịlaịza na ihuenyo, dewatering ihuenyo, curved ihuenyo, sinusoidal ihuenyo, CZS usoro ntụrụndụ ihuenyo, GTS usoro drum ihuenyo.
• Feeder: CZG ụdị abụọ-jijiji feeder, akpa vibrating feeder, belt / yinye feeder, reciprocating coal feeder, CYPB quantitative diski feeder, FZC usoro vibrating Ngwuputa igwe, ịghasa ebu, yinye ebu, vibration ebu, belt ebu, ịwụ mbuli.
• Crusher: mgbanaka hama crusher, reversible crusher, cone crusher, mmetụta crusher.
• Akụkụ ahụ mapụtara: nkwakọba mgbidi vibrator, CJZ oche ụdị vibration exciter, mkpa mmanụ vibrator coal grate, vibration moto, sọrọ-axis vibrator, na ndị ọzọ na ngwaahịa ngwa.
Kemgbe ntọala ya, iguzosi ike n'ezi ihe na-etinye nyocha na teknụzụ mgbe niile na mbu, ma n'otu oge ahụ na-azụ ahịa ma na-arụsi ọrụ ike ịmalite nyocha na mmepe teknụzụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ nyocha na nyocha nke Chengxin nwere ihe karịrị ndị injinia 80 na ndị ọrụ ntanetị. Site technology iwebata na nkà na ụzụ mgbanwe, ụlọ ọrụ ike ike oru imekọ ihe ọnụ na a maara nke ọma anụ ụlọ mahadum ma guzosie ike ihe enterprise technology nnyocha na mmepe center. Companylọ ọrụ ahụ na-etinye ihe karịrị 10% nke uru ya na ụlọ ọrụ sayensị na-eme kwa afọ, a na-ejikwa ego niile iji zụlite teknụzụ, yabụ ebe nyocha ahụ nwere ego zuru ezu.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nke ahụmịhe ọrụ, jikọtara na teknụzụ dị elu n'ụlọ na mba ọzọ, Chengxin Vibration emepewo ọtụtụ arụmọrụ dị elu, ihe ngbanwe gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi na ntanetị na-ejupụta mkpa ahịa. N'otu oge ahụ, eserese niile nke ụlọ ọrụ ahụ na-ejikwa sistemụ njikwa data PDM, nke na-ahụta mgbanwe ozi nke imewe, njikwa, na mmepụta, na-eme ka arụmọrụ nke ngwa ọrụ ahụ ka mma, ma na-eme ka ngwangwa nke mmepe ngwaahịa pụta.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ahụ emeriwo nkwado na ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa kwekọrọ na ụkpụrụ azụmahịa nke "Na-emeso ndị ahịa ezigbo okwukwe, yana ngwaahịa zuru oke iji merie ntụkwasị obi nke ndị ahịa", erere ngwaahịa niile na mba ahụ rere na mba ofesi, ma anatala otu olu!
ọdịbendị ụlọ ọrụ
Ime ihe n'eziokwu na-ewulite ika ahụ, ihe ọhụrụ na-ewulite ọdịnihu.
Lọọrụ na-elekọta mmadụ ọrụ
1. Nchegbu maka ọha mmadụ
• Nye onyinye na ebe ọ dị mkpa n'oge iji nyeghachi ọha mmadụ.
• Gbanwee nsogbu ọrụ.
2. Nlekọta gburugburu ebe obibi
• Tinye ego buru ibu iji kwalite mmepe nke gburugburu. nchedo teknụzụ, ma nye aka na mmezu nke mmepe mmepe.
• Zaghachi oku mba iji ike dị ọcha ma chekwaa ihe mba.
1. ịmụta 6S management mode iji hụ na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi nke. ndị ọrụ dị ọcha ma dị mma.
2. Mee ka mmekorita ya na mahadum sie ike, melite ogo ngwaahịa, ma chebe ọdịmma nke ndị zụrụ ihe.
3. Nkesa nke ndị ọrụ ọdịmma n'oge ezumike.